သည်းခံနိုင်တဲ့လူတောင် ဒေါသအလိပ်လိုက်ထွက်လာမယ့် အဖြစ်များ – ရှအေလငျး
တစ်ခါတလေမှာတော့ ဘဝမှာမနှစ်မြို့စရာဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ တချို့ကိစ္စတွေက မတော်တဆဖြစ်တတ်သလို၊ တချို့ကတော့ အကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကြောင့် ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီလိုအဖြစ်အချို့အား တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
၁. လမ်းလျှောက်ဖြတ်ကူးဖို့ အချက်ပေးရမယ့် ခလုတ်မှာမှ ဝါးပြီးစား ပီကေကို ကပ်သွားတာပါ။ ဘတ်စ်ကား တွေပေါ်မှာလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးကောင်းကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
၂. မလိုအပ်ဘဲ မီးလုံးကြီးတွေ ဖွင့်မောင်းတဲ့သူတွေကြောင့်လည်း ကားထူထပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖူးမှာ အမှန်ပါပဲ။ ပုံထဲက မီးကိုကြည့်ရတာတောင် မျက်လုံးထဲ ဝင်းပြီးကျန်ခဲ့လောက်တယ်။ အပြင်မှာဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့။
၃. ဒါကတော့ အစားအသောက်တွေကို ထုပ်ပိုးတဲ့နေရာမှာ ပါရင်းစွဲထက် ပိုများသလိုလို ထင်ရအောင် အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ ပုံတစ်ခုပါပဲ။ ဒီဇိုင်းလှပဖို့ရော ထုတ်ကုန်ပါဝင်စရာ နေရာနည်းသွားအောင်ရော လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
၄. အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ခရီးသွားလာတဲ့ ယာဉ်တွေပေါ်မှာ ဒီလိုလူတွေကို မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ လူရှင်းတဲ့ အချိန်မှာ နေချင်သလိုနေတာ ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ဘေးမှာလူတွေရှိနေတာကို အတ္တကြီး တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်စွာ လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကတော့ အသိဥာဏ်အောက်ဆုံးအဆင့်ပါပဲ။
၅. ကြုံတွေ့ရခဲပေမယ့် ကြုံတော့ ကြုံတတ်မယ့် ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဘောပင်တွေကို လှလို့ ဝယ်လိုက်ပြီး တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မှင်အရောင်မတူဖြစ်နေရင် စာရေးနေရင်း အသုံးပြုနေရင်းဆို တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ ရှေ့နဲ့ နောက် စာလုံးတွေက အရောင်မတူတော့လို့ပါ။
၆. ကပ်ခွာနဲ့ ကော်တွေပါတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို သူများကားရဲ့ မှန်တွေ ကိုယ်ထည်တွေမှာလည်း မကပ်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်အကျိုးအမြတ်အတွက် တပါးသူ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
တဈခါတလမှောတော့ ဘဝမှာမနှဈမွို့စရာဖွဈရပျတှနေဲ့ ကွုံတှရေ့မှာ အသအေခြာပါပဲ။ တခြို့ကိစ်စတှကေ မတျောတဆဖွဈတတျသလို၊ တခြို့ကတော့ အကငျြ့မကောငျးတဲ့သူတှကွေောငျ့ ကွုံရတတျပါတယျ။ ပွောခငျြလှနျးလို့ ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီလိုအဖွဈအခြို့အား တငျဆကျပေးပါရစေ။
၁. လမျးလြှောကျဖွတျကူးဖို့ အခကျြပေးရမယျ့ ခလုတျမှာမှ ဝါးပွီးစား ပီကကေို ကပျသှားတာပါ။ ဘတျဈကား တှပေျေါမှာလညျး ဒီလိုအဖွဈမြိုး ကွုံဖူးကောငျးကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။
၂. မလိုအပျဘဲ မီးလုံးကွီးတှေ ဖှငျ့မောငျးတဲ့သူတှကွေောငျ့လညျး ကားထူထပျတဲ့နရောမြိုးတှမှော အနှောငျ့အယှကျဖွဈဖူးမှာ အမှနျပါပဲ။ ပုံထဲက မီးကိုကွညျ့ရတာတောငျ မကျြလုံးထဲ ဝငျးပွီးကနျြခဲ့လောကျတယျ။ အပွငျမှာဆိုရငျတော့ ပွောမနနေဲ့။
၃. ဒါကတော့ အစားအသောကျတှကေို ထုပျပိုးတဲ့နရောမှာ ပါရငျးစှဲထကျ ပိုမြားသလိုလို ထငျရအောငျ အသုံးပွုလရှေိ့တဲ့ ပုံတဈခုပါပဲ။ ဒီဇိုငျးလှပဖို့ရော ထုတျကုနျပါဝငျစရာ နရောနညျးသှားအောငျရော လုပျလရှေိ့ပါတယျ။
၄. အမြားနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ ခရီးသှားလာတဲ့ ယာဉျတှပေျေါမှာ ဒီလိုလူတှကေို မွငျရလရှေိ့ပါတယျ။ လူရှငျးတဲ့ အခြိနျမှာ နခေငျြသလိုနတော ပွဿနာမဟုတျပမေယျ့ ဘေးမှာလူတှရှေိနတောကို အတ်တကွီး တဈကိုယျကောငျး ဆနျစှာ လုပျတတျတဲ့သူတှကေတော့ အသိဉာဏျအောကျဆုံးအဆငျ့ပါပဲ။
၅. ကွုံတှရေ့ခဲပမေယျ့ ကွုံတော့ ကွုံတတျမယျ့ ကိစ်စတဈခုပါ။ ဘောပငျတှကေို လှလို့ ဝယျလိုကျပွီး တဈခုနဲ့ တဈခု မှငျအရောငျမတူဖွဈနရေငျ စာရေးနရေငျး အသုံးပွုနရေငျးဆို တျောတျောဒုက်ခရောကျပါတယျ။ ရှနေဲ့ နောကျ စာလုံးတှကေ အရောငျမတူတော့လို့ပါ။
၆. ကပျခှာနဲ့ ကျောတှပေါတဲ့ ကွျောငွာတှကေို သူမြားကားရဲ့ မှနျတှေ ကိုယျထညျတှမှောလညျး မကပျသငျ့ပါဘူး။ ကိုယျ့အကြိုးအမွတျအတှကျ တပါးသူ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈရပါလိမျ့မယျ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင် …တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ….မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဟု …မိုး/ဇလ ထုတ်ပြန်
“ငါးမျှားနေသော ရဟန်း နှင့် သင်္ကန်းလှူသော မင်းကြီး”
ဦးမင်းစိန်ရဲ့ ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ သမီးလေးအတွက် ကျောင်းစရိတ်တာဝန်ယူပေးမယ့်...
ဘယ်သူ့ကိုတိုင်ချင်လဲ? ..အဂတိနှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် ...